> Resource> Nyefee> otú nyefee faịlụ site PC ka iPad
Gbalịa nyefee faịlụ site na PC na-iPad? Mgbe owning ihe iPad, i nwere ike na-amasị mbubata music, videos, na foto na ihe ndị ọzọ na ya ugbu a na mgbe ahụ, n'ihi ya, ị pụrụ ịnụ ụtọ ha kpam kpam. Ma, ọ bụ adịghị mfe ime otú ahụ. Ọ bụrụ na gị iPad bụ ọhụrụ, ị nwere ike itinye faịlụ ka ya site nnọọ syncing iTunes na ya. Gịnị ma ọ bụrụ na i nwere nke a iPad ruo oge ụfọdụ? Ọ bụrụ na ị ka na-eme nke ahụ, ị ​​ga-atụfu ihe ọ bụla na gị iPad. Ọ bụ manụ, karịsịa mgbe faịlụ gị iPad bụ mbụ.
N'ihi ya, nyefee faịlụ ka iPad si PC, ị ga-mma na-agbalị ọzọ ngwọta. I nwere ike iri Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wonershare TunesGo (Mac) dị ka a na-agbalị. Nke a kacha PC ka iPad transfer nwere ike ime na gị dị mfe na ụzọ dị mfe. Na ya, ị na-enwe ike iṅomi music, videos, photos na ndị ọzọ site na kọmputa gị iPad, na Anglịkan.
Otú nyefee faịlụ site na PC na-iPad
Nke mbụ niile, ibudata a na kọmputa na-iPad transfer na kọmputa gị. Mgbe ahụ, na-eso anyị na-lelee mfe nzọụkwụ n'okpuru. Ebe a, dị na-Windows version dị ka a na-agbalị.
Nzọụkwụ 1. Gbaa a usoro
Na-agba ọsọ a na kọmputa na-iPad transfer mgbe wụnye ya. Jiri eriri USB jikọọ gị iPad gị na kọmputa. Nke a na usoro ga-chọpụta gị iPad ozugbo.
Nzọụkwụ 2. Nyefee faịlụ na iPad
Ebe a ga-amasị m ịkọrọ gị otú ị nyefee music, videos, playlist, foto na kọntaktị gị iPad otu otu.
Iji nyefee music ka iPad, pịa "Media" taabụ na ekpe kọlụm. Na media window, pịa "Music" button. Mgbe ị na-abịa na music window, pịa "Tinye". Nke a na-eweta elu a faịlụ window. Chọta music faịlụ ma ọ bụ music nchekwa na ị na-ekpebi mbubata gị iPad. Wee bulite ha gị iPad. Mgbe music format bụ na-emegide gị iPad, programmụ a ga-enyere gị aka tọghata ya iPad dakọtara otu.
Cheta na: Nke a PC ka iPad transfer bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The New iPad, iPad 2 na iPad.
Ọ bụ otu ihe mbubata videos gị iPad. Pịa "Media"> "Videos"> "Tinye".
Iji nyefee playlist gị iPad, ị kwesịrị ị pịa "Playlist". Pịa "Tinye". Na ya esiri-ala ndepụta, họrọ "Tinye playlist site na kọmputa."
Ọ bụrụ na i bu n'obi na idetuo ọkacha mmasị gị foto gị iPad, ị kwesịrị ị pịa "Photos" taabụ. All albums na-egosipụta na nri. Mee ka album ịzọpụta photos. Ma ọ bụ ị nwekwara ike pịa "Tinye" ike ọhụrụ album. Wee mepee album na pịa "Tinye" mbubata gị chọrọ photos.
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ iji iPad ime ọrụ gị, i nwere ike chọrọ nyefee kọntaktsị na ya. Mbubata kọntaktị, ị dị nnọọ mkpa pịa "Ndi ana-akpo" taabụ. Na kọntaktị window, pịa "Import / Export". Mgbe ahọrọ "Import kọntaktị site na kọmputa." Na ya dobe ala ndepụta, ị nwere nhọrọ: si vCard faịlụ, si Windows Live Mail, site Outlook Express, si Outlook 2003/2007/2010/2013 na site na Windows Address Book. Họrọ otu. Mgbe ahụ na kọntaktị faịlụ na mbubata ya.
Cheta na: Ugbu a, Mac version anaghị akwado na-ebufe kọntaktị site na PC na-iPad.
Nke ahụ bụ nkuzi banyere otú nyefee faịlụ site na kọmputa na-iPad. Ugbu a, dị nnọọ ibudata a na kọmputa na-iPad transfer inwe a na-agbalị!